ဘယ်လိုက AVI အွန်လိုင်းဖို့ MP4 ကိုပြောင်းမှ - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကို၏ဖွဲ့စည်းပုံက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်များပေးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကပါဝင်သည်။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိတ်အပိုင်း activated နိုင်ပါတယ်ဘယ်လို Firefox မှာ WebGL ကို၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဖို့အဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စည်းကမ်းနှင့်အမျှ WebGL ကို enabled ကို default ဖြစ် Mozilla Firefox browser ကိုအတွက်, သို့သော်, အချို့သောအသုံးပြုသူများ browser မှာ WebGL ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြသည်။ ဒါကဖြစ်ကောင်း PC ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုဂရပ်ဖစ်ကဒ် hardware acceleration ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပြီး, ထို့ကြောင့် WebGL ကို default အနေဖြင့်အသက်သွင်းခြင်းရပ်ဆိုင်းထားနိုင်ပါသည်။
Mozilla က Firefox မှာ WebGL ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
1. လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ WebGL ကိုသင့် browser များအတွက်အလုပ်လုပ်အတည်ပြုရန်ဒီစာမျက်နှာကိုသွားပါ။ သငျသညျအောက်ပါပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုတွေ့ပါလျှင် - အရာရာချောသည်, Mozilla က Firefox မှာ WebGL ကိုတက်ကြွစွာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးကို browser အတွက်ကာတွန်းတုံးမြင်လျက် error message ကိုသို့မဟုတ် WebGL ကို၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေး၏မရှိခြင်းကိုပြမထားဘူးဆိုရင်, သာထို့နောက်သူကသင့်ရဲ့ browser မှာ WebGL ကိုမလှုပ်မရှားကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
2. သငျသညျလှုပ်ရှားမှု WebGL ကိုလက်ခံယုံကြည်ပါက, သငျသညျကို Activation ၏ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအသငျသညျနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း Mozilla Firefox ကို upgrade လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Mozilla Firefox ကို Update လုပ်နည်း
3. Mozilla Firefox ရဲ့ address bar မှာအောက်ပါ link ကို click နှိပ်ပြီး:
သတိပေးသင် button ကို click ရန်လိုအပ်မည်သည့်အတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "ငါသတိထားဖြစ်လိမ့်မယ်ကတိပေး".
4. ရှာဖွေရေးအကွက်တွင် Call ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းကို Ctrl + အက်ဖ် သငျသညျ parameters များကိုအောက်ပါစာရင်းရှာပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏ညာဘက်တန်ဖိုး "စစ်မှန်သော" တန်ဖိုးရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်:
မည်သည့် parameter သည်တန်ဖိုးတစ်ခု "မှားယွင်းသော" ရကျိုးနပ်သည်အကြောင်းကိုလျှင်, သင်လိုချင်တန်ဖိုးပြောင်းလဲပစ်ရန်အ parameter သည်အပေါ်ကို double click နှိပ်ပြီး click ပါ။
အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပြီးနောက်, configuration window ကိုပိတ်ဖို့နှင့် browser ကို restart ချလိုက်ပါ။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှ WebGL ကိုဤအကြံပြုချက်များပြီးပါကပြီးနောက်ဿုံအလုပ်လုပ်။